Course Directory – VirtualX Academy
Ukukhuluma iziLimi ezahlukene kubalulekile ekwenzeni ukuxhumana kubelula, nasekuthuthukiseni umuntu ngamunye kanye nesizwe. INingizimu Afrika iyizwe elikhuluma iziLimi eziningi. Ziyishumi nanye iziLimi ezisemthethweni ezikhulunywa eNingizimu Afrika. Yingakho ke kubalulekile ukuthi izingane ziqale ukufunda ezinye iziLimi kusenesikhathi. Ucwaningo lubeka ngokusobala ukuthi kuyithuthukisa kangakanani ingqondo ukufunda olunye uLimi. IziLimi ezengeziwe zifundeka kangcono uma izingane zinesisekelo esiqinile noma esifanele soLimi Lwasekhaya (HL). ULimi Lwasekhaya luyisisekelo noma lwenza kube lula ukufunda ezinye iziLimi ezimweni ezahlukene ngezilimi ezahlukene.
IsiZulu Ulimi Lwesibili Lokwengeza Grade 2
In the Foundation Phase, the skills in the Home Language curriculum are: Thinking and Reasoning and Language Structure and Use which are integrated into all four language skills (listening, speaking, reading and writing)
In the Foundation Phase, the main skills in the First Additional Language curriculum are: Thinking and Reasoning and Language Structure and Use, which are integrated into all 4 languages skills (listening, speaking, reading and writing)